Shiinaha nadiifiyaha cufnaanta hoose ee warshadda qalabka garaaca waraaqaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. YUNFENG
Nadiifiyaha cufnaanta hoose ee qalabka wax lagu garaaco
Sharaxaadda Badeecadda Nadiifiyaha joogtada ah ee hooseeya wuxuu ku habboon yahay nadiifinta ganaax fiber oo leh joogtaynta 0.4-1.2%. 606 Nadiifiye culus oo aad u hufan si looga saaro ciidda qulqulaysa, faylasha birta ah, siigada iyo walxaha waaweyn ee khadadka iyo waxyaalaha kale ee wasakhda badan ee nadaafadda saxarka. 400 nadiifiye culus ayaa la isugu dari karaa iyadoo loo eegayo nadiifiye khafiif ah oo kala duwan, si loo gaaro saamaynta nadiifinta ee la doonayo. Xuduudaha farsamo ee ugu muhiimsan Hal mar: 580-600L / min Horta plasma ...
Nadiifiyaha joogtada ah ee hooseeya wuxuu ku habboon yahay nadiifinta ganaax fiber oo leh joogtaynta 0.4-1.2%.
606 Nadiifiye culus oo aad u hufan si looga saaro ciidda qulqulaysa, faylasha birta ah, siigada iyo walxaha waaweyn ee khadadka iyo waxyaalaha kale ee wasakhda badan ee nadaafadda saxarka. 400 nadiifiye culus ayaa la isugu dari karaa iyadoo loo eegayo nadiifiye khafiif ah oo kala duwan, si loo gaaro saamaynta nadiifinta ee la doonayo.
Hal mar: 580-600L / daqiiqo
Cadaadiska plasma-ga: O.2-0.4MPa
Cadaadiska hoos u dhaca. O.14-0.175MPa
Isugeynta uruurinta plasma: 0.6-1.0%
Saamiga cabbirka halbeegga ee hal-mar ah: 15-30% (qadarka qulqulka qulqulka quudinta)
Nadiifinta Centrifugal waxaa si ballaaran loogu dabaqayaa nidaamka dariiqa mashiinka xaashiyaha, tuubista iyo nidaamka nuujinta ee warqadda qashinka.Waxay ka saari kartaa waxyaabaha dhalaalaya kululaynta, qurubyada khadadka, buro fiber, ganaax iyo wasakh u eg-joomatari u eg iyo culeys culus oo ka soo baxa waraaqaha si wax ku ool ah. Waxay soo saari kartaa saxarka waraaq tayo sare leh oo aan lahayn wasakhda caadiga ah iyo waxyaabaha wasakhda ah.
Waxay si hufan uga sameyn kartaa shaashad aan qallafsaneyn qashinka xaashida qashinka ah, waxay fududeyn kartaa habraacyada wax soosaarka waxayna yareyneysaa isticmaalka korontada.
Saamiga saxarka ee 0.5 ilaa 1.0% isku dheelitirnaanta ayaa lagu quudiyaa iyada oo loo marayo madaxa tuubada galitaanka nadiifinta iyo kaydka ayaa galaya marinka la taaban karo ee xawaareynaya kaydka si uu hoos ugu sii socdo dhaqdhaqaaqa wareega dhexe. Waxyaabaha sunta keena sida wasakhda, shive, iyo dhibcaha culeyska gaarka leh ee gaarka ah ayaa lagu qasbay derbiga bannaanka ee koorta ah iyo hoos hoos iyada oo loo marayo diidmada orifice si ay u diidaan madax, diidmada ayaa mar kale quudinta ilaa heerka 2aad ee nadiifiyeyaasha.
Microcrystal koorta / biiyaha alumina-iska caabinta
* Qaaday aagga arjiga: koorta / biiyaha Alumina ee iska-caabbinta-caabbinta waxay ku habboon tahay baaritaanka qalabka qalabka warshadaha sida warshad waraaqaha, batroolka, macdanta, mashiinka birta, warshad koronto, iwm .Waxaa loo isticmaali karaa sida duufaan, mashiinka wax baabi'iya, soo galitaanka slurry , socodka hoose, dhexroor isbeddelaya, iwm.
Qolofta kore ee alumina platformka jirka ee vertebral waxaa laga sameyn karaa bir, polyurethane iyo qalab kale, dahaarka gudaha waxaa laga sameeyaa alumina ceramics oo leh iska caabin heer sare ah, taas oo kaliya aan ku siineyn ciyaar kuleylka heerkulka sare iyo u adkeysiga wasakhda ee dhoobada, laakiin sidoo kale waxay siineysaa ciyaarta astaamaha xoogga sare iyo adkaanta qalabka dibedda si looga hortago waxyeelada dhoobada, iyo isku dhafka isku dhafan ayaa ku habboon beddelka iyo rakibidda.
* Qaado astaamaha sheyga: iska caabin abrasion wanaagsan; adkaanta mohsku waxay gaari kartaa 9.0
Hore: 133 isku-dheelitirnaan hooseysa oo laba-jibbaar nadiifiyaha saxarka ah ee mashiinka / warqadda dib-u-warshadaynta qashinka
Xiga: ISO9001 14001 qashin xirfadle ahama birta nadiifiyaha cufnaanta hoose ee loo isticmaalo sameynta warqadda saxarka
Hawlgal Nadiifiyaha Cufnaanta Sare
Nadiifiyaha Cufnaanta Polyetylenka
Nadiifiyaha Nadiifinta Birta ahama ee ahama
Xashiishka Qashinka Nadiifi Nadiifiyaha Cufnaanta Yar